Wasiir Geel-jire Oo Munaasibad Afur iyo Casho-sharaf U Sammeeyay Ururka Ay Leeyihiin Haweenka Qurba-jooga Ee SLWA | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa (ANN) Wasiirka Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayaraadka badaha Cabdillaahi Maxamed Geeljire,ayaa xalay cassuumad sharafeed aafur iyo casho ah ugu sammeeyay Hudheelka Ambasaddor ee magaalada Hargeysa Urur ay leeyihiin Haween ka mid ah qurba-jooga Somaliland oo
lagu magcaabo (Somaliland Women Association), isla markaana loo soo gaabiyo SLWA, kaas oo ah urur xaruntiisu tahay London, oo laamo faracyo ah ku leh Somaliland.
Munaasibad-sharafeedkan oo ay ka soo qaybgaleen Wasiirka Xannaanada Xoolaha Dr. Cabdi Aw-daahir iyo Agaasimaha xafiiska xidhiidhka goleyaasha madaxtooyadda Bashiir Cabdi Xariir, ayaa Wasiir Geel-jire oo hadal kooban ka jeediyay,sheegay in munaasibada ayaa xusay inay tahay mid ka jawaabaysa soo-dhawayn Haweenka SLWA ee ay ku bahoobeen haweenka qurbaha ee Somaliland, kuwaas oo sida uu sheegay u sammeeyeen isaga iyo xubno xukuumada ka tirsan oo safar ku tegay London soo dhawyn balaadhan.
Wasiirku waxa uu xogwaran ka bixiyay duruufaha ku xeeran mandaqada Afrika ee badankeeda qalalaasuhu hadheeyay iyo sida Somaliland uga nabadgashay, una abuurtay nabadgelyo iyo hanaan dimuqraadi ah oo ay kaga gaashaamatay dhibaatooyinkaa.
Wasiir Geeljire waxa uu carabka ku dhuftay in dalal badan oo adduunka ahi u soo jeesteen Somaliland oo ay danaynayaan, gaar ahaan dawladda Ingiriiska oo wakhtiyadan danbe taageero u muujinaysa Somaliland.
Guddoomiyaha Ururka SLWA Marwo Caasha Xuseen Maraykan, ayaa uga mahadcelisay sida qiimaha leh ee Wasiiraddu u soo dhaweeyeen, islamarkaana xustay in ururkoodu yahay mid ka shaqayn doona horumarinta iyo taakulaynta dadka ku dayacan dalka gudihiisa (Vulnerable people).
Guddoomiye Caasha waxay intaa raacisay in ururku wakiillo iyo xafiisyo ku leeyahay gudaha Somaliland, iyadoo qaar ka mid ah wakiillada gudaha ee SLWA ka soo qaybgaleen munaasibadda.
Qaar ka mid ah haweenka qurba-jooga ah ee ka soo qaybgalay, ayaa iyaguna su’aalo kala duwan ka weydiiyaya wasiiradda xaaladaha kala duwan ee dalku ku suganyahay, qorshaha dawladda iyo tilmaamo iyo tallooyin ay u jeediyeen.